जनयुद्ध र जनविद्रोहको उच्च संश्लेषण एकीकृत जनक्रान्ति हो - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएकाे थियाे । अाज २२ वर्ष पुगेर २३ वर्ष लागेको छ । जनयुद्धको पहलकर्तामध्येको एकजना तपाईं पनि हो । जनयुद्धको तयारी कसरी गरिएको थियो ?
दस वर्षको दौरानमा भएका मुख्य उपब्धिहरू केके हुन् र तिनीहरूले नेपालको सिङ्गो राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पारेको थियो ?
पहिलो र सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि नेपाली जनताले पहिलोपटक आफ्नै बल र सहभागितामा जनसत्ता निर्माण गर्न सके । देशको धेरै भूभाग (सबैले भनेअनुसार ८०प्रतिशत) मा जनसत्ता निर्माण भयो । दोस्रो, जनताले आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै छोराछोरीको जनमुक्ति सेना निर्माण गर्न सफल भए । जुन जनमुक्ति सेनाले साधारण साधनहरूको बलमा ठूलाठूला युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न सक्यो । तेस्रो, जनताको सत्ता मातहतमा जनताको न्यायनिसाफ गर्ने जनअदालत गठन गर्न सफल भए । जनअदालतहरू निकै लोकप्रिय र प्रभावकारी पनि रहे । चौथो, जनप्रशासननिर्माण भए । ती संस्थाहरूले जनतालाई कुनै पनि लेनदेन, कारोबार, सरसहयोगलाई जनताकै घरमा बसेर सहयोग गरे । जस्तोकि जग्गाजमिन, सरसापटी, बनरक्षाआदिआदि । पाँचौँ, सामाजिक क्षेत्रका धेरै कार्यहरू जनताहरूले सहजैप्राप्त गर्ने भए । जनसुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, बस्ती विकास, नयाँ समाज कम्युन र सहकारीको निर्माण, समाजसुधार(जाँडरक्सी, जुवातास, गुन्डागर्दीको नियन्त्रण) भए । छैटौँ, जनसत्ताले आफ्नै आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो । बैङ्क, सहकारी, उद्योग, कलकारखाना(साबुन उद्योग, कपडा उद्योग, गार्मेन्ट उद्योग, खाजाउद्योग आदि) सञ्चालन ग¥यो । यीबाहेक र मसिना कार्यहरू यतिधेरै गरियो जसको विस्तारमा यहाँ चर्चानै छैन ।
जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरेर संसदीय राजनीतिक प्रणालीभित्र प्रवेश गरेको पनि ११ वर्ष भयो । अहिले भएका यी परिघटनाहरूलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
अहिले आएर जनयुद्धका मुख्य योजनाकार भनेर चिनिने प्रचण्ड, बादल र बाबुरामहरूले जस्तो बाटो तय गरिराख्नुभएको छ, यस्तो यात्रामा हुनुको मुख्यकारण के होला ?
हिजो जनयुद्धको माध्यमबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल गर्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर अहिले यही संसदीय व्यवस्थामा उनीहरूले समाजवाद लागू गर्ने कुरा गरिराखेका छन् । के यो व्यवस्थामा समाजवाद सम्भव छ ?
एकपटक संशोधनवादी वर्नेस्टेनको सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको थियो,‘आफू त डुब्योडुब्यो माक्र्सलाई समेत सामान्य उदारवादीको तहमा झार्ने कोसिस ग¥यो ।’ यहाँ प्रचण्ड र बाबुरामहरूले समाजवादको हल्ला गर्दा भन्नुपर्ने हुन्छ–यिनीहरू आफू त डुबेडुबे, वैज्ञानिक समाजवादलाई महान् उचाइबाट दलाल पुँजीवादको तहमा झार्ने खेलो गर्दैछन् । दलाल पुँजीवादले नेपाली अस्मितामाथि लुट मच्चाएको बेला यसलाई ‘समाजवाद’ भन्नु अपराधमाथिको ढाकछोप गर्ने कुकर्म मात्र हो । सबैलाई थाहा छ– यो संसदीय व्यवस्था हो र त्यो पनि दलाल चरित्र बोकेको संसदीय व्यवस्था हो । तर यहाँ एकीकृत जनक्रान्तिबाट जन्मलिँदै गएको वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता भने नयाँ भविष्य बोकेर आउँदैछ ।
उनीहरूले भन्दै गरेको समाजवाद र यहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको वैज्ञानिक समाजवादका बीचमा के तात्विक भिन्नता रहेको छ ?
नेपालमा समाजवाद कसरी लागू गर्न सकिन्छ ? त्यसका मुख्य आधारहरू के के होलान् ?
२०७२ सालमा संविधानको घोषणा गरी अहिलेसम्म संसदीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत सबैतहका चुनावहरू सकिएका छन् । यसलाई उनीहरूले संविधानको कार्यान्वयन भनेका छन् । चुनावपछिको नेपालको राजनीतिमा देखिएका परिदृश्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
गत केन्द्रीय समितिको बैठकले एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी’ भनेको छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी किन भनिएको होला ?
जनयुद्धका मुख्य अभियन्ता मानिएका प्रचण्डहरूले प्रतिक्रियावादका सामु आत्मसमर्पण मात्र गरेनन्, जनयुद्धका सबै उपलब्धिहरू गुमाएका छन् । यसक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भग्नावशेषमा उभिएर एकीकृत जनक्रान्तिको जग हालेको छ । नेकपाको मुख्य नेतृत्व भएकाले कस्तो अनुभव गरिराख्नुभएको छ ?
अहिले नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एक्ता र ध्रुवीकरण गर्ने समाचारहरू आइरहेका छन् नि ? एक्ता वा ध्रुवीकरणका मुख्य आधारहरू केलाई बनाइरहनुभएको छ ?
एकताकाे कुरा कुन कुन पार्टीसँग भइरहेको छ ?
ठोस रूपमा हाम्रो छलफल कमरेड किरणले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) सँग भइरहेको छ । त्यसैगरी माकेबाट विद्रोह गर्नुभएका कमरेड लोकन्द्र बिष्ट (अभ्यास) सँग पनि छलफल चलेकोछ । अन्य पार्टी र कमरेडहरूसँग पनि छलफल चल्दैछ । यस सन्दर्भमा म विशेष प्रकारले माकेभित्रका इमानदार कमरेडहरू जसले क्रान्तिबाट वैज्ञानिक समाजवादी नेपालको सपना देखेर जीवनलाई क्रान्तिमा होम्नुभएको थियो र आज पनि क्रान्तिभन्दा अर्को सोचिरहनुभएको छैन, उहाँहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु– आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादसँग विद्रोह गर्नुस् । जनताको हितमा विद्रोह गर्नु क्रान्तिकारीहरूको अधिकारसँगै विशेष जिम्मेवारी हो । साथै क्रान्तिकारी धु्रवीकरणमा एक्ताबद्ध बनौँ । क्रान्ति प्रबल सम्भावना सहित हाम्रा सामु छ ।
नेकपाले अहिले केकस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ ?
केन्द्रीय समितिले ऐतिहासिक चुनाव खारेज अभियानको संश्लेषण गर्दै आउँदो ३ महिने ‘जनजागरण अभियान‘ सञ्चालन गर्ने निर्णय लियो । हामीले ५ तयारीमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेकाछौँ । आफ्नो विचार र राजनीतिलाई जनतासम्म पु¥याउने, जनतालाई सम्भव भएसम्म सङ्गठित गर्ने, राष्ट्रियता, जनअधिकार र दैनिक समस्यालाई लिएर सङ्घर्षमा परिचालित हुने, आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने र साधनस्रोतलाई व्यवस्थित गर्ने । निर्णयलाई यही माघ १५बाट उद्घाटन पनि गरिसकिएको छ र कार्यक्रमहरूशानदारढङ्गले सञ्चालन भइरहेकाछन् । यस अवसरमा म सबै अभियात्री कमरेडहरूलाई धेरैधेरै शुभकामना दिन चाहन्छु । जनयुद्ध दिवस भव्य उत्साह र उमङ्गका साथ मनाऔँ ! निराशाको समय गयो ! नयाँ कार्यभार पूरा गर्ने दिन आएको छ । जनयुद्ध र जनविद्रोहको उच्च संश्लेषण ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को मार्गमा लामबद्ध बनौँ । वैज्ञानिक समाजवादका लागि क्रान्ति, क्रान्ति र फेरि पनि क्रान्ति ! सबैलाई पुनःहार्दिक शुभकामना !